Dawid Ansuro | Momfa Nkyerɛkyerɛ Mo Mma
KENKAN WƆ Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Ahanta Ajië Albanian Altai Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bomu Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chokwe Chol Chuabo Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Lovari Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mandjak Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mende Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pemon Pennsylvania German Piaroa Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Susu Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Xârâcùù Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Sɛ wusuro biribi a, dɛn na wobɛyɛ?— Ebia wubetu mmirika akɔ wo maame anaa wo papa hɔ ma waboa wo. Nanso obi foforo nso wɔ hɔ a obetumi aboa wo. Ɔwɔ tumi sen obiara. Wunim no?— Ɛyɛ Yehowa Nyankopɔn. Ma yɛnka aberante bi a ne ho asɛm wɔ Bible mu ho asɛm. Ne din de Dawid. Ná onim sɛ Yehowa bɛboa no bere nyinaa, enti na onsuro.
Efi Dawid mmofraase pɛɛ na n’awofo kyerɛkyerɛɛ no ma ɔdɔɔ Yehowa. Eyi boaa Dawid ma enti sɛ na ohyia biribi a ɛyɛ hu mpo a, na onsuro. Ná onim sɛ Yehowa yɛ n’Adamfo; na onim sɛ Yehowa bɛboa no. Bere bi a na Dawid rehwɛ nguan no, gyata kɛse bi bɛkyeree ne nguan no biako! Wunim nea Dawid yɛe? Otuu mmirika dii gyata no akyi, na ɛbɛyɛ sɛ ɔde ne nsa kɛkɛ na ekum gyata no! Ɛda foforo nso, osisi bi bae sɛ ɔrebɛkyere Dawid nguan no, na okum osisi no nso! Sɛ wohwɛ a, hena na ɔboaa Dawid?— Ɛyɛ Yehowa na ɔboaa no.
Bere foforo nso, Dawid san de akokoduru paa yɛɛ ade bi. Ná Israelfo ne nkurɔfo bi a wɔfrɛ wɔn Filistifo reko. Ná Filistifo asraafo no biako yɛ ɔbarima tenten kɛse paa! Ne din de Goliat. Ná saa ɔbarima tenten kɛse no redi Israelfo asraafo no ne Yehowa ho fɛw. Goliat ka kyerɛɛ Israelfo asraafo no sɛ, nea ɔpɛ no mmra na ɔne no mmɛko. Nanso, na Israelfo no nyinaa suro paa sɛ wɔne no bɛko. Bere a Dawid tee asɛm no, ɔka kyerɛɛ Goliat sɛ: ‘Me ne wo bɛko! Yehowa bɛboa me, na medi wo so nkonim!’ Sɛ wohwɛ a, so na Dawid wɔ akokoduru?— Ná ɔwɔ akokoduru paa. Wopɛ sɛ wuhu nea esii?
Dawid faa n’ataabo ne mmoba anum a ɛho yɛ toromtorom. Ataabo yɛ ade a wɔde aboba hyɛ mu tow. Afei ɔkɔe sɛ ɔne Goliat rekɔko. Bere a Goliat hui sɛ Dawid yɛ abofra no, odii Dawid ho fɛw. Nanso, Dawid ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Wo de, wode nkrante na ɛreba me so, nanso me de, mede Yehowa din!’ Afei, ɔde aboba hyɛɛ n’ataabo no mu tuu mmirika kɔɔ Goliat so, na ɔtow aboba no kɔɔ no so tẽẽ. Aboba no kɔbɔɔ Goliat aniwa ntam! Goliat hwee fam, na owui! Ehu kaa Filistifo no paa ma wɔn nyinaa guanee. Ɛyɛɛ dɛn na abarimaa Dawid tumi kum Goliat?— Ɛyɛ Yehowa na ɔboaa no. Yehowa wɔ tumi kɛse sen Goliat!
Dawid ansuro, efisɛ na onim sɛ Yehowa bɛboa no
Dɛn na wubetumi asua afi Dawid ho asɛm yi mu?— Ɛne sɛ, Yehowa wɔ tumi kɛse sen obiara. Ɔyɛ wo nso w’Adamfo. Enti bere biara a wubesuro anaa ehu bɛka wo no, kae sɛ, Yehowa betumi aboa wo ma woanya akokoduru!
Dwom 56:3, 4
Bere a gyata ne osisi kɔkyeree Dawid nguan no, dɛn na Dawid yɛe?
Bere a Goliat dii Yehowa ho fɛw no, asɛm bɛn na Dawid ka kyerɛɛ Goliat?
Ɛyɛɛ dɛn na Dawid tumi kum Goliat?
Dɛn nti na na Dawid nsuro gyata, osisi, ne Goliat?
Dɛn na wubetumi asua afi Dawid ho asɛm no mu?